कसरी सकारात्मक आत्म कुरा तपाईंको जीवन लाई रूपान्तरण गर्न सक्दछ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जनवरी 8, 2021 | सकारात्मक सोच, व्यक्तिगत विकास, आत्म-सुधार |0|
1 स्वयं कुराकानीको ढाँचाहरू
1.1 सकारात्मक स्वयं कुराकानी गर्न संक्रमण बनाउने
1.2 सकारात्मक स्वयं कुराकानीको प्रभाव
के तपाईंलाई थाहा छ सकारात्मक स्वयं कुराकानीको प्रयोगले तपाईंको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ?
आत्म वार्ता हामी आफैंमा कुराकानी गर्न प्रयोग गर्ने संवाद हो। यो हामीले सोचेका शब्दहरू र हाम्रा धारणाहरू हाम्रो परिस्थितिको र हाम्रो हो आफ्नै आत्म छवि.
चाहे सकारात्मक हो वा नकारात्मक, आत्म-कुराकानीले हाम्रो आत्मसम्मानको भावनालाई असर गर्छ, हाम्रो आत्मसम्मान, र हामी कसरी परिस्थितिमा महसुस गर्छौं र प्रतिक्रिया दिन्छौं। संक्षिप्तमा, यसले शाब्दिक रूपमा हाम्रो जीवनको सबै चीजलाई असर गर्दछ किनकि हाम्रो विचारहरूले हाम्रा कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्धारित गर्दछ।
त्यसोभए यदि हाम्रो विचारहरू सकारात्मक छन् भने, हाम्रो कार्यहरू पनि सकारात्मक र यसको विपरित हुनेछ।
स्वयं कुराकानी बान्की बाल्यकालमा प्रारम्भ हुन्छ। यी ढाँचाहरू बाहिरी प्रभावबाट पहिले विकसित हुन्छन्। हाम्रो आफैंको धारणा सकरात्मक वा नकारात्मक चीजहरूबाट आउँदछ जुन हाम्रा आमा बुबा र अन्य वयस्कहरूले हामीसँग कुरा गर्छन्। यो संचार मौखिक वा कार्य र प्रतिक्रिया मार्फत हुन सक्छ।
जब हामी ठूला हुन थालेका छौं र आफ्नै विचारहरू राख्छौं उनीहरूले स्वाभाविक नै हाम्रो प्रारम्भिक बचपनमा सम्मिलित गरिएको ढाँचाको अनुसरण गर्‍यो। तथ्य यो हो कि हामी आफैंसँग लगातार कुराकानी गरिरहेका छौं मानसिक बातचीतको स्थिर प्रवाहमा।
यो सकारात्मक बडबड वा नकारात्मक बडबड हुन सक्छ। दुःखको कुरा, धेरै व्यक्तिहरू नकारात्मक आत्म कुराको बानी बसालेका र विकास गरेका छन्। यसको मतलब यो छ कि साना समस्याहरू र अवरोधहरू ठूला व्यक्तिहरूमा बनेका छन्, अवसरहरूको फाइदा लिईदैनन् र जीवन त्यति पूरा हुने र पुरस्कृत हुने जस्तो छैन।
शुभ समाचार यो हो, हामी आफैंको कुराकानीमा नियन्त्रण गर्छौं। हाम्रो दिमाग शक्तिशाली उपकरणहरू हुन् जुन हामी हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन प्रयोग गर्न सक्छौं। ती सबै अद्भुत जीवन घटनाहरू र ती शानदार सफलताहरू केवल तपाईंको दिमागमा जाने सेल्फ बकबक परिवर्तन गरेर साच्चै तपाईको हुन सक्छ।
सकारात्मक आत्म वार्ता उत्थान, आत्मविश्वास निर्माण बयान र विचारहरू जुन हामी नकारात्मकबाट सकारात्मकमा बदल्न प्रयोग गर्दछौं र हाम्रो फोकसलाई त्यहाँ राख्दछौं, परिणामस्वरूप खराबलाई राम्रोसँग बदल्ने।
हामी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जीवनमा सबैलाई अझ सकरात्मक बनाउन सक्दैनौं यद्यपि हामीले आफ्नो जीवनमा के खान दिन्छौं त्यसको नियन्त्रण लिन सक्दछौं।
सकारात्मक स्व-वार्तालापमा परिवर्तन गर्न यसले समय र समर्पण लिन्छ तर यसले लाभांश दिन्छ र यसले हाम्रो समग्र आनन्दमा ठूलो फरक पार्न सक्छ।
तिनीहरूका लागि जो नकारात्मक आत्म कुराकानीको साथ बाँचिरहेका छन् आफ्नो जीवनको अधिकांशको लागि, सकारात्मक स्वयं कुराकानी को संक्रमण सँधै चिल्लो हुँदैन। धेरै परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र परिवर्तन कहिलेकाँही गाह्रो हुन्छ।
केवल याद राख्नुहोस् कि तपाईको नकारात्मक आत्म कुरा प्रणालहरु रात रात बनाएन त्यसैले न त नयाँ सकारात्मक आत्म कुरा गर्ने बानी तत्काल हुनेछ।
पहिलो चरण भनेको तपाईले कहाँ नकरात्मकता हटाउनु पर्ने हुन्छ पहिचान गर्नु हो। हामी मध्ये अधिकांशको सपनाहरु छन् जुन हामीले कम्तिमा सबै नकारात्मक मानसिक बकबकको कारणले महसुस गर्न सकेनौं।
संक्षेप मा, हामी हाम्रो सपना को दिशा मा काम बाट बाहिर कुरा। यो तपाईंको सपनाको क्यारियर वा सम्बन्ध हुन सक्छ जुन तपाईं थप सद्भाव र प्रेम ल्याउन चाहानुहुन्छ।
सबै नकारात्मक विचार र दृष्टिकोण को बारे मा सचेत हुनु तपाइँ तपाइँको लक्षहरु को लागी तपाइँको निकटता र के परिवर्तन गर्न आवश्यक छ देखाउँदछ।
नकारात्मक विचार र सर्तहरू जुन तपाइँ त्यो विशेष क्षेत्रको वरिपरि प्रयोग गर्नुहुन्छ सक्रिय रूपमा नोट गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई ती हानिकारक सर्तहरू लेखेर शून्य गर्न मद्दत गर्दछ।
उनीहरूलाई तल लेख्दा यसले तपाईलाई भिजुअल दिन्छ कि तपाई आफैलाई कति नकारात्मकता प्रयोग गर्नुहुन्छ हरेक दिन आफैलाई। यसले तपाईंलाई चकित तुल्याउन सक्छ। एकचोटि तपाईंले यो देख्नु भएपछि, तपाईं आफ्नो आत्म कुराकानी बदल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सकरात्मक आत्म कुराकानी बढाउने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यो हो सकारात्मक पुष्टिकरण, वा सकारात्मक कथनहरू, जस्तै, 'म सफल हुन योग्य छु।' एक पुष्टिकरण छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँको व्यक्तिगत लक्ष्योंसँग सम्बन्धित छ।
प्रत्येक दिन आफैलाई केहि पुष्टिकरणहरू भन्न थाल्नुहोस्, प्रत्येक पटक जब तपाईं आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्नुहुन्छ तपाईं सुधार गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैंले यो पहिले आफैंमा विश्वास पनि नगर्नुहोला, तथापि समयको साथ तपाईले त्यस बयान र तपाईको बारेमा के विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नेमा बदलाव देख्नुहुनेछ।
अब, तपाईंको नकारात्मकताको सूची निकाल्नुहोस् र तपाईंले आफैं र अरूलाई भनेको शब्दहरू परिवर्तन गर्न सुरू गर्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो अफिसमा जानुहुन्छ र आफ्नो डेस्कमा कामको भार देख्नुहुन्छ, सामान्य परिवर्तन गर्नुहोस्, 'म यी सबै कहिले पनि गर्ने छैन' '' मलाई यो कसरी गर्ने भनेर जान्दछु र म यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम छु, म यो गर्नेछु। सफल
सकारात्मक आत्म वार्ता मार्फत आफैलाई प्रोत्साहित गर्ने यो सरल कार्यले तपाईंलाई विश्वासको लागि र सफल हुन प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
अझ बढी यो हो कि यो संक्रामक हुनेछ र तपाईं आफुलाई वरपरका मानिसहरूलाई उत्साहित पार्नुहुनेछ जुन प्रायः सफलताको लागि उत्कृष्ट सकारात्मक वातावरण बनाउन पछाडि हिर्काउँदैन।
डेनमार्कको एक अध्ययनले सुझाव दिन्छ एक सकारात्मक दृष्टिकोण संग हृदय रोग बिरामीहरु 42 प्रतिशत नकारात्मक दृष्टिकोणको साथ भन्दा पाँच वर्षको अवधिमा मर्ने सम्भावना कम थियो।
एक पटक तपाईं सकारात्मक आत्म कुराकानी अभ्यास सुरु गर्नुभयो तपाईंले धेरै परिवर्तनहरू देख्नुहुनेछ। यी परिवर्तनहरू, समयसँगै तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त भएको रूपमा प्रकट हुनेछ। सकारात्मक परिवर्तनहरू तपाईंसँग रोकिदैन। तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो वरिपरिको जीवनमा देख्नुहुनेछ।
सकारात्मक स्वयं कुराकानीको प्रभाव टाढा पुग्दै छ। न केवल तपाई आफैंको बारेमा राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ र अधिक आत्मविश्वास, तपाईका वरपरका व्यक्तिहरूले त्यो आत्म-सम्मान र विश्वास देख्नेछन् र त्यस अनुसार व्यवहार गर्नुहोस्। उनीहरूसँग तपाईंबाट उच्च अपेक्षा हुनेछ र तपाईं पनी जीवित रहनुहुनेछ।
अवश्य पनि त्यहाँ अपसेटहरू र डाउन डाउनहरू हुन सक्छन्। सकारात्मक स्व-वार्तालापको तपाईंको नयाँ बानीले तपाईंको लागि के गर्छ तपाईंलाई यी सेट ब्याकहरू ह्यान्डल गर्न मद्दत गर्दछ।
सानो देखि ठूला निराशहरूमा, तपाईं आफैंलाई फिर्ता माथि तान्न सक्षम हुनुहुनेछ, तपाइँका लक्ष्यहरू रिसेट गर्नुहोस्, र जारी राख्नुहोस्। पराजित गर्न तपाईंलाई पराजित गर्नमा गाह्रो समय हुनेछ किनकि तपाईंलाई अब सकारात्मक स्व-वार्तालाप कसरी चालु गर्ने थाहा छ।
सकारात्मक सकारात्मक लाई आकर्षित गर्दछ। राम्रो तपाईं सकारात्मक आत्म वार्ता मा अधिक सकारात्मकता तपाईंको जीवन को सबै क्षेत्रहरु मा प्रवाह र बदलीमा, राम्रो कुरा तपाईं प्रवाह गर्न सुरु हुनेछ।
यो केवल तपाइँको स्वयं कुरा संशोधित गर्न समझदार बनाउँछ। तपाईंसँग हराउन केहि छैन र प्राप्त गर्न जीवनभर सद्भाव र खुशी छ। तपाईं अहिले सुरू गर्न सक्नुहुन्छ!
पछिल्लोसकारात्मक आत्म कुरा बुझ्नु तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ
अर्कोसिफारिश गरिएको व्यक्तिगत विकास पुस्तकहरू २०२०